Berbera: Madaxweyne Siilaanyo oo Dhagax-dhig, xadhig-ka-jaris iyo Kormeer ku sameeyey Mashaariic kala duwan (DAAWO SAWIRRADA) - Somaliland Post
Home News Berbera: Madaxweyne Siilaanyo oo Dhagax-dhig, xadhig-ka-jaris iyo Kormeer ku sameeyey Mashaariic kala...
Berbera: Madaxweyne Siilaanyo oo Dhagax-dhig, xadhig-ka-jaris iyo Kormeer ku sameeyey Mashaariic kala duwan (DAAWO SAWIRRADA)
Berbera (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa mashaariic laga hirgeliyey xadhigga uga jaray, qaar cusubna u dhagax-dhigay Maamulka iyo hay’adaha dawladda ee magaalada Berbera, isaga oo dhinaca kale kormeer ku sameeyey mashaariic ka socota dekedda Berbera.
Madaxweyne Siilaanyo oo ku guda-jira socdaal uu Isniintii dorraad ugu baxay magaalada Berbera oo isaga iyo xubno golihiisa wasiirrada ka tirsan diyaarad khaas ah ku tageen, waxa uu maanta dhagax-dhigay dhisme Wasaaradda Deegaanka ku yeelan doonto gobolka Saaxil iyo xarun loogu talo-galay xannaanaynta Dhirta oo magaalada Berbera laga hirgelin doono.
Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Marwo Shukri Baandare iyo Madaxweynaha Somaliland, ayaa si wada-jir ah u dhagax-dhigay dhisme wasaaradda Deegaanku ku yeelan doonto gobolka Saaxil iyo sidoo kale xarunta lagu xannaaneyn doono Dhirta kala duwan oo ay ugu mudan yihiin Abqaalka Geedka Dhamasta oo magaalada Berbera caan ku tahay.
Madaxweynuhu waxa uu ugu horayn Kormeer uu ugu kuur-galayo dib u dhis iyo ballaadhin lagu samaynayo ku marayo dekedda magaaalada Berbera, waxaana halkaas ku qaabilay maamulka dekedda Berbera oo faahfaahin ka siiyey madaxweynaha qorshayaasha ay maamul ahaan u dejiyaan qaybo lagu kordhinayo dekedda Berbera.
“Waxa farxad noo ah madaxweynaha, marwada Qaranka iyo wasiirrada faraha badan ee la socda inay kormeer nagu soo maraan shaqada halkan ka socota oo ah qaybtii labaad ee kordhinta barxadda lagu keydiyo Konteenarrada buuxa. Waxaanu ku talo-jirnaa ilaa laba bilood inaanu ku dhammayno qaybta labaad shubkeeda oo ah ilaa saddex Hiktar,” Sidaas waxa yidhi Maareeyaha dekedda Berbera oo madaxweynaha u sharraxayay hawsha ballaadhinta dekedda Berbera.
Madaxweyne Siilaanyo oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa maamulka dekedda Berbera iyo hawl-wadeennada ku gudo-jiray shaqada ballaadhinta qaybta labaad ee Barxadda Keydka Koonteerrada uga mahad-celiyey muhiimadda hawsha ay hayaan, isaga oo u rejeeyey in Eebbe ku guuleeyo hawsha ay hayaan. Kormeerka madaxweynuhu ku maray hawsha ballaadhinta ee Dekedda Berbera, ayaa noqonaysa markii labaad, isaga oo hore uga qayb-galay isla markaana u furay wejigii hore ee ballaadhinta dekedda Berbera dabayaaqada bishii hore oo uu booqasho ku tagay.
Md Axmed Siilaanyo waxa kale oo uu ka qayb-galay munaasibad uu xadhigga ka jaray waddo siddeed Kilomitir ah oo dawladda hoose ee Berbera ku hirgelisay muddo bil ah, taas oo noqotay waddadii u horeysay ee nooceeda laga hirgeliyey magaalada Berbera, iyada oo horumarkaas lagu ammaanay Maayarka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Cidin oo lagu tilmaamay maayarkii ugu horeeyey ee waddo 8 KM ka hirgeliya magaalada.
Maayarka Berbera Cabdishakuur Ciddin oo munaasibadda ka hadlay, ayaa yidhi, “Waddadani waxay hordhac u tahay bilicda magaalada, waxaanan halkan ka caddeynayaa oo dadka u sheegayaa in dawladda Hoose ee magaalada Berbera ay fulisay mashruucan. Mudane, madaxweyne Dawladda Hoose ee magaalada Berbera, waxay ku nabad-gashay oo Illaahay (SWT) adiga sabab kaaga dhigay in dhaqaalaha degmada Berbera cid faro-gelin ku samaysaa aanay jirin.”
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo halkaas ka hadlday, ayaa maamulka dawladda Hoose ee Berbera, gaar ahaan maayarka caasimadda gobolka Saaxil, ku ammaanay hawlkarnimo iyo dedaal dheeraad, isaga oo wasiirku halkaas shahaado sharaf ku guddoonsiiyey maayarka Cabdishakuur Ciddin.
Madaxweyne Siilaanyo oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa furitaanka waddada 8-da KM kadib, waxa uu maamulka Dawladda Hoose ee Berbera ku ammaanay hawl-karnimo iyo in muddo bil gudaheed ah ay ku hirgeliyeen waddo laami ah oo 8 KM ah.